Dhaqdhaqaaqa Ka-hortagga Gaajada-La-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-Free
Dadka oo dhami waxay xaq u leeyihiin inay gaajada ka xoroobaan.
Hase yeeshee mid ka mid ah toddobadii qoys ee Oregon ayaa wajahaya caqabad ah in cuntada la saaro miiska. Sababtoo ah caddaalad-darrada taariikhiga ah sida midab-takoorka iyo nacayb-xumada, dadka midabka leh iyo haweenka ayaa si aan xad lahayn loo diidaa xaqaas. Kiraystayaasha Oregon waxay aad ugu dhawdahay inay la kulmaan gaajo marka loo eego kuwa guryaha leh, wayna ka gaajaysan yihiin kiraystayaasha Maraykanka intiisa kale.
Ma aha inay sidan noqoto. Waxaan aaminsanahay inaan ka gudubno sinnaan la'aanta bulshada iyadoo la adeegsanayo kheyraad iyo siyaasado la beegsaday. Waxaan shaqadeena udub dhexaad u ah waaya aragnimada nololeed ee dadka soo food saartay cunto yari. Anagoo kaashanayna la-hawlgalayaal badan - iyo adiga - waxaan ku guuleysaneynaa isbeddello si aan noogu soo dhawaado aragtida Oregon-gaajo-la'aanta.
Baro wax badan oo ku saabsan ajandayaasha isbeddelka siyaasaddayada iyo sida aad codkaaga ugu kicin karto si wax ku ool ah isbeddel.
Wax badan baro oo Talaabo qaado
Guddiga La-talinta Macmiilka ee SNAP waxa uu siiya boos geesinimo leh oo hore, hadda, iyo mustaqbalka ka qaybgalayaasha SNAP si ay u horumariyaan barnaamijka kuwa qaata SNAP. Guddigu wuxuu u jiraa inuu isbedel sameeyo, la xisaabtamo go'aamiyeyaasha, oo hubiyo inay jirto helitaan siman oo SNAP ah dhammaan. Waxaan tan ku sameynaa anagoo la shaqeyneyno u doodayaasha, ururada bulshada, iyo sharci-yaqaannada.
Ku dhaqan hal isbedel oo ay bulshadu waddo barnaamijka adeegga cuntada ee dugsiga wadaagga ah
Ilmo kastaa wuxuu mudan yahay bilow caafimaad qaba oo nolosha ah. Cuntooyinka dugsigu waxay ka caawiyaan carruurta inay bartaan, koraan, oo koraan. Ololaha Dugsiyada Ka Xorta ah ee Gaajada waxa uu raadiyaa in uu horumariyo talooyinka siyaasadda oo uu ku guuleysto isbeddelka sharci-dejinta 2019 si uu Oregon u saaro waddada uu ku noqonayo hoggaamiyaha hubinta in ilmo kasta si fiican loogu nafaqeeyo dugsiga.
Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta waxay isugu yeeraan Ciidanka Hawsha Gaajada Oregon. Ciidanka Hawsha waxaa abuuray Sharci-dejinta Gobolka si ay ugu dhaqmaan kheyraadka gudaha dowladda iyo u doodaha gobolka oo dhan ee dadka reer Oregon ee gaajaysan ama halis ugu jira gaajo. Waxay si wada jir ah ula shaqeysaa daneeyayaasha Oregon oo dhan si ay u ururiyaan cilmi baarista, horumarinta soo jeedinta waxqabadka dowladda, iyo isku xirka adeegyada ka hortagga gaajada ee heerka gobolka. Sahami Qorshaha Kooxda Hawsha ee hadda lagu doonayo in lagu soo afjaro gaajada iyo sidoo kale cilmi-baadhistii ugu dambaysay ee ku saabsan xaaladda sugnaanshaha cuntada ee Oregon oregonhungertaskforce.org